July Dream: March 2009
Posted by JulyDream at 11:11 PM 26 comments:
တပ်မတော်နေ့... ဟိုမှာတော့ ရုံးတွေ ပိတ်ပါမယ်။ ဒီမှာတော့ ဘာမှ မထူးခြားပါဘူး။ ဟိုက သူငယ်ချင်းတွေ လမ်းလျှောက်ရပါမယ်။ ဒီက သူငယ်ချင်းတွေ ရုံးတက်ရပါတယ်။ ဟိုမှာ နေပူပါတယ်။ ဒီမှာ မိုးအုံပါတယ်။
အထွေအထူးတော့ မရှိပါဘူး။ တပ်မတော်ရဲ့ အစဉ်အဆက် ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် စာရင်းကို ၀ီကီမှာ ဖတ်မိလို့ မှတ်ထားလိုက်ပါအုံးမယ်။ နံပါတ် ၁ ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အခုနောက်ဆုံး အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေကိုပဲ အသိများခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်လည်း ဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့မှန်း သိခဲ့သလို ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းလည်း တပ်မတော်ကို အုပ်ချုပ်ဦးစီးခဲ့တာ စာဖတ်ခဲ့လို့ နည်းနည်းသိခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကြားထဲက ဦးစီးချုပ်တွေကို ဦးစီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့မှန်း စိုးစင်းမျှမသိခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ။ စစ်တပ်ဆိုတာ ကျွန်တော်နဲ့ မဆိုင်တော့ ဝေးဝေးနေခဲ့တာလည်း ပါတာပေါ့။
Chief of armed forces from 1945 to date
1. Major General Aung San (Founder & Father of Tatmadaw)
2. Major General Let Yar
3. Lt General Smith Dunn
4. General Ne Win
5. General San Yu
6. General Thura Tin Oo(NLD)
7. General Thura Kyaw Htin
8. Sr General Saw Maung
9. Sr General Than Shwe
အားလုံးထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သဘောအကျဆုံးပဲ။ သူ့အကြောင်းတွေပဲ ဖတ်မှတ်ခဲ့လို့လား မသိဘူး။ လူမျိုးခြားတစ်ဦးအနေနဲ့ ကျွန်တော် သူ့ကို လေးစားမိတယ်။ အထင်လည်း ကြီးတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်လို့ ဂုဏ်ပြုခေါ်ဝေါ် ခံထိုက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ဦးအဖြစ် စွဲမှတ်ထားမိတယ်။ ကျန်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အကြောင်းတော့ သိပ်ပြီး ထိတွေ့မှု မရှိခဲ့ဘူး။ တကူးတကလည်း ရှာမဖတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ကို တော်လှန်ရေးနေ့လို့ မှတ်သားထားဖူးတယ်။ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို တော်လှန်ခဲ့လို့ တော်လှန်ရေးနေ့ပေါ့။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ တပ်မတော်နေ့ ဖြစ်သွားတယ်။ တပ်မတော်ကြီး စတင် ဖြစ်တည် မွေးဖွားခဲ့လို့လား။ အမှန်ဆို ရဲဘော်သုံးကျိပ်နဲ့အတူ တစ်နိုင်ငံလုံး အင်္ဂလိပ်ကို ချကတည်းက တပ်မတော်က ဖြစ်တည်နေပြီပဲ။ BIA ဆိုတာပေါ့။ ကျွန်တော့် အထင်တွေပါ။ မှားကောင်း မှားနိုင်ပါတယ်။
ဒီအသက်အရွယ်အထိ တပ်မတော်နေ့ စစ်ကြောင်းတွေ လမ်းလျှောက်ချီတက်တဲ့ နေရာကို ယောင်လို့တောင် မရောက်ခဲ့သေးဘူး။ ကျောင်းက ခေါ်လည်း မလိုက်ဘူး။ အိပ်ရာ စောစောမထနိုင်လို့။ ပန်းကုံးစွပ်ဖို့ဆိုတာ ဝေးပါသေးတယ်။ သေနတ်ထိပ်ဝမှာ တပ်ထားတဲ့ လှံစွပ်တွေနဲ့များ မတော်တဆ ထိုးမိရင် ဒုက္ခလှလှလေ။ လှံစွပ်တွေက ထက်မှ ထက်။ နေရောင်အောက်မှာ တဖွေးဖွေးပဲ။
ညဘက်ဆို တော်လှန်ရေးပန်းခြံမှာ မီးရှူးမီးပန်းတွေ ဖောက်တာကို အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ် တက်ပြီး ကြည့်ခဲ့ကြတာ မှတ်မိသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ရန်ကုန်မှာ ကန်ထရိုက်တိုက်တွေ မှိုလို မပေါသေးဘူး။ မီးပန်းတွေ ဖွားခနဲ တက်လာရင် ဟေးခနဲ အော်ခဲ့ကြတာ ပျော်စရာပါပဲ။ ရပ်ကွက်ထဲက ကျွန်တော်တို့အရွယ် ကလေးတွေလည်း ပျော်ပျော်ပါးပါး အော်ကြဟစ်ကြပေါ့။ နောင်များမှာတော့ တိုက်အမြင့်ကြီးတွေ ကွယ်သွားလို့လား မသိဘူး။ ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်နေတာများ တပ်မတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ် မီးရှူးမီးပန်းဖောက်မယ် ဆိုတာတောင် သတိမထားမိကြတော့ဘူး။ စိတ်လည်း မ၀င်စားတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ လောကီအပူတွေနဲ့ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ တိုင်ပတ်နေကြပြီလေ။
ခေတ်တွေ ပြောင်းသွားပုံများ သံဝေဂတွေ ယူတတ်ရင်တောင် တရားရပါမယ်။ အရာရာဟာ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သဘောရှိကြပါတယ်လေ။ ဖြစ်ပြီးရင်တော့ ပျက်မှာပါပဲ။
ဘယ်တော့ ပျက်မလဲဆိုတာကို မသိသေးတာပဲ ရှိကြတာပါဗျာ။
တော်လှန်ရေးနေ့မှ တပ်မတော်နေ့ဆီသို့... အမှတ်တရ
Posted by JulyDream at 10:30 PM 10 comments:
Labels: Dedication, Record, Straw
Posted by JulyDream at 11:10 PM 14 comments:
Posted by JulyDream at 11:15 PM7comments:
ပထမဦးဆုံး ရိုက်ကြည့်ခဲ့တဲ့ Bokeh ပုံပါ။ Botanic Garden ကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားလည်ခဲ့တုန်းက စမ်းရိုက်ခဲ့တာပါ။ ရိုက်တတ်သလို ရိုက်လာတဲ့ပုံဖြစ်လို့ ပုံထွက်တော့ သိပ်မကောင်းလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ပထမဦးဆုံး ထွက်လာတဲ့ Bokeh ပုံဖြစ်လို့ အမှတ်တရအနေနဲ့ တင်ထားလိုက်တာပါ။
Bokeh ဆိုတာ ဂျပန်စကားကနေ လာတာပါ။ ၀ါးတားတားလို့ပဲ ဘာသာပြန်ရမလား မသိဘူး။ လိုချင်တဲ့ အပိုင်းကိုပဲ Focus ဖြတ် ထင်ရှားအောင် လုပ်ပြီး မလိုတဲ့အပိုင်းတွေကို ၀ါးသွားအောင် ရိုက်တာမျိုးပါ။ အဲဒီ အသုံးအနှုန်းက ၂၀၀၀ခုနှစ်က စပြီး အသုံး တွင်ကျယ်လာခဲ့တာပါ။ အစကတော့ Fuzzy လို့ သုံးကြပါတယ်။
Posted by JulyDream at 11:01 PM 11 comments:
တေးရေးဆရာက ပြည်သန်းနွယ်ပါ။ တေးဆိုကတော့ မြန်မာပြည်သိန်းတန်ပါ။ ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့ အဆိုတော် သိန်းတန်က နှစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ တွံ့တေးသိန်းတန်နဲ့ မြန်မာပြည်သိန်းတန်ပါ။ တွံတေးသိန်းတန်ကိုတော့ မြန်မာသံစဉ်တွေ သီဆိုတာ ကြားဖူးခဲ့ပေမယ့် မြန်မာပြည်သိန်းတန်ကို အခုလိုမျိုး မြန်မာသံစဉ်တွေ ဆိုခဲ့မှန်း လုံးဝ မသိခဲ့ပါဘူး။ စနေထောင့်မှာ ပန်းလှူမယ်၊ နှင်းပွင့်သစ္စာ၊ ချစ်ရည်းစား၊ တပါးသူ မနမ်းစေချင် စတဲ့ ခေတ်ပေါ်တေးသီချင်းတွေပဲ သီဆိုတယ်လို့ပဲ ထင်ထားခဲ့တာပါ။
မနေ့ညက YouTube မှာ လိုချင်တဲ့ သီချင်းတွေ ဟိုဟိုဒီဒီ ရှာဖွေမွှေနှောက်နေရင်း အခုလို မြန်မာသံစဉ် သီချင်းတွေကိုလည်း မြန်မာပြည်သိန်းတန် သီဆိုထားတယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရတာပါ။ ငယ်ကျွမ်းဆွေ၊ ရွှေသုန္ဓရီ သီချင်းတွေကိုလည်း သူ ဆိုခဲ့တာကို အဲဒီတော့မှ တွေ့ခဲ့သိခဲ့တာပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက လမ်းထဲက ဓမ္မာရုံမှာ ဥပုသ်နေ့ဆွမ်းလောင်းဖို့ အလှူခံတိုင်း လော်စပီကာကြီးနဲ့ အဲဒီသီချင်းတွေကို အကျယ်ကြီး ဖွင့်လေ့ရှိပါတယ်။ ကလေးဘ၀ကတော့ နားငြီးစေခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေပါ။ ဒါကြောင့် သီချင်းတွေကို ကြားဖူးပေမယ့် အဆိုတော် ဘယ်သူမှန်း မသိခဲ့ပါဘူး။ အလှူတွေမှာဖွင့်ကြတဲ့ တောသီချင်းတွေလို့ပဲ အလွယ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး အဆိုတော် ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိအောင်လည်း မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
အခုမှ ပြန်တွေ့တော့ စာသားတွေက တကယ်ထိမိလှပါတယ်။ အဖွဲ့အနွဲ့တွေ ကောင်းတာကို သတိပြုမိတယ်။ တပါးမေရယ် တကယ်မုန်းရင်... အဆုံးစီရင်တော့ကွယ်... ဆိုတဲ့သီချင်းစာသားလေးကို အတော်လေး နှစ်ခြိုက် သဘောကျမိတယ်။ အတိဿယ၀ုတ္တိ အလင်္ကာမြောက်ပေမယ့် သက်ဆိုင်သူတွေရဲ့ ရွှေနားတော်မှာတော့ စာသားတွေက ကြည်နူးစရာ ပြုံးမိစရာလေးပါပဲ။ လတ်တလော ခံစားချက်အချို့နဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိပေမယ့် သီချင်းစာသားတွေကို ရိုးရိုးသားသား သဘောကျမိပါတယ်။ သြော်... ဒါနဲ့ အခုတလော ကျွန်တော် အိပ်နိုင် စားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by JulyDream at 9:09 PM 16 comments:
Posted by JulyDream at 10:10 AM 14 comments:
တွေးမိတာတောင် ရင်မှာ မချိပါဘူး...
Posted by JulyDream at 10:10 PM 23 comments:
အစတုန်းက ကျွန်တော့်စားပွဲမှာ ချစ်စရာ ဓါတ်ပုံမှန်ဘောင်လေး မရှိခဲ့ဘူး။ အခုတော့ မှန်ဘောင်လေးတစ်ခု နေရာယူလာခဲ့ပြီပေါ့။ နံရံထောင့်လေး လွတ်နေတဲ့ နေရာလေးက အခုတော့ ဓါတ်ပုံလေးနဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျ လိုက်ဖက်ညီ လှပနေပါပြီ။ ဘောလ်ပင်တွေ ထည့်ထားတဲ့ ခွက်လေးကတောင် သူ့ပိုင်နက်နေရာလေးကို ဖယ်ပေးလိုက်ရလို့ ကျွန်တော့်ကိုများ မကျေမနပ် ဖြစ်နေမလားပဲ။ အစက အဲဒီနေရာမှာ အဲဒီခွက်ကလေးကို ထားထားတာလေ။
ဓါတ်ပုံလေးရှေ့က ပြက္ခဒိန်လေးကတော့ လက်ချိုးရေရမယ့် ရက်တွေကို ပြနေတယ်လေ။ အဲဒီလ အဲဒီအချိန်ကို ရောက်ဖို့ ရက်တွေ အများကြီး ကျန်နေသေးတယ်တဲ့။ ရင်မောရတာပေါ့ဗျာ။ ရှေ့က စပီကာလေးကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် သံစဉ်ချိုချိုတွေ ထုတ်ပေးရင်း ကျွန်တော့်ကို အလွမ်းတွေပိုအောင် ဖန်တီးပေးတဲ့သူပေါ့။ သူ့ဘေးနားက အိုင်ပေါ့ဒ်လေးက ကိုယ်နဲ့မကွာ ထားတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် ရုံးသွားရုံးပြန် ရထားပေါ် ကားပေါ် အချိန်တွေ၊ ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာ သူက ကျွန်တော်ရဲ့ အိပ်ကပ်ထဲမှာ အမြဲတမ်း နေရာယူလေ့ရှိတယ်။ ညဘက်ရောက်မှပဲ သူ့ခမျာ အနားယူရရှာတာ။ အဲဒီအချိန်ကျတော့ စပီကာတွေက အလုပ်လုပ်နေကြပြီလေ။
သူ့ရှေ့မှာတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ ဟန်းဖုန်းလေးပါ။ တကယ်တော့ သူ့ခင်မျာ အိမ်ဖုန်းလောက်တောင် တာဝန် မယူရရှာပါဘူး။ ရုံးမှာဆို ရုံးဖုန်းသုံးတယ်။ အိမ်မှာဆို အိမ်ဖုန်းသုံးတယ်။ တစ်နေ့နေလို့ ဖုန်းတစ်ခါတောင် မလာတော့ သူ့ခင်မျာ အေးဆေးလေး နားနေရတာများပါတယ်။ ညပိုင်းဆိုလည်း အခုလို စားပွဲပေါ်မှာပဲ ငြိမ်ငြိမ်လေး နေနေရရှာတယ်။ သူငယ်ချင်း အများစုက ဂျီတော့ခ်ကနေ စာရိုက်ပြီး စကားပြောကြတယ်။ တကူးတက ဖုန်းခေါ်မနေကြဘူး။
စားပွဲ အလည်တည့်တည့်က ကွန်ပျူတာကတော့ ရုံးက ပေးထားတဲ့ ကွန်ပျူတာပါ။ ရုံးမှာလည်း သူနဲ့ပဲ။ အိမ်မှာလည်း သူနဲ့ပဲ။ အချစ်လေးနဲ့ ဂျီတော့ခ်မှာ စကားပြောရင်လည်း သူကနေ တဆင့်ပေါ့။ ကျွန်တော့် ခံစားချက်တွေ သီဖွဲ့ရင်လည်း သူ့ကိုပဲ သုံးရတာပဲလေ။ အခုတလော သူကတော့ ငြီးနေရှာမှာပါ။ လွမ်းတယ် ချစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုပဲ ခဏခဏ ပြောနေ ကြားနေ ရေးဖွဲ့နေလို့တဲ့။ ကြည့်ရတာ သူလည်း ကျွန်တော့်ကို အားကျ မနာလို ဖြစ်သွားပုံပဲ။ အားလည်းကျမိတယ်။ မနာလိုလည်း ဖြစ်မိတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။ သူ့ကိုတော့ အတော်အားနာပေမယ့် ကျွန်တော်ကလည်း ဒါတွေပဲ ရေးဖွဲ့ ပြောနေရမှာပဲလေ။ ကျွန်တော်က မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်မိနေတာကိုး။ ဒါကြောင့် ချစ်တာကို ချစ်တယ်လို့ ရိုးသားစွာ ပြောမိတာပေါ့။
ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ နာရီလေးကတော့ နှိုးစက်လေးပေါ့။ တခါတလေ ကျွန်တော့်ဘာသာ အိပ်ရာမထဖြစ်ရင် နှိုးစက်အချိန် ပေးထားရတယ်။ မဟုတ်ရင် ရုံးကို အတော်လေး နောက်ကျမှ ရောက်မှာလေ။ ခဏခဏ ရုံးနောက်ကျတာတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် သူက ကျွန်တော့်ကို အိပ်ရာက နှိုးပေးရှာပါတယ်။ အိပ်ရာက နှိုးလာတိုင်း သတိရမိတာက ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိပါတယ်နော်။ နှိုးစက်လေးကြောင့် ကျွန်တော် မနက်ခင်းတိုင်း သတိရခြင်းများစွာနဲ့ အိပ်ရာက နှိုးထခဲ့တာပေါ့။ ညဆိုလည်း ၁၁ နာရီခွဲပြီလားကို မကြာခဏ လှမ်းလှမ်းကြည့်မိလို့ သူလည်း ရှက်နေလောက်ပါပြီ။
အနောက်က ဖုန်းလေးကတော့ အိမ်ဖုန်းပါပဲ။ ကျွန်တော့် အခန်းထဲမှာ တစ်လုံး တပ်ထားတယ်။ အပြင်မှာ တစ်လုံးရှိတယ်။ ညစဉ်ညစဉ် အချစ်နဲ့ ရင်ထဲက စကားတွေ ဖွင့်ဟပြောဖို့အတွက် သူ့ခင်မျာ မငြီးမငြူ မငြိုမငြင် တာဝန်ယူပေးရှာပါတယ်။ ကျွန်တော် နှိပ်သမျှ နံပါတ်ပေါင်း များစွာကို ခံရရှာတယ်။ တစ်ခါခေါ်လို့ မရရင် နောက်တစ်ခါ ဖုန်းနံပါတ် ထပ်နှိပ်ပြီး ခေါ်ရတော့ နံပါတ်တွေ အများကြီး နှိပ်ဖြစ်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းပြောရင်း ပြုံးနေတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ မျက်နှာကို အနီးကပ် မြင်ခွင့်ရထားတဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုပါ။ အဲဒီအတွက် သူကျေနပ်နေမှာ ကျွန်တော် သိနေတယ်။
သူတို့တွေ အားလုံးကြားမှာ ဧည့်သည် အသစ်လေးတစ်ခု တိုးလာပြီပေါ့။ အဲဒါကတော့ ချစ်သူရဲ့ ဓါတ်ပုံပါတဲ့ မှန်ဘောင်လေးပေါ့။ ပုဂံဘုရားတွေရဲ့ နီညိုညို အုတ်အရောင်၊ မှန်ဘောင်ရဲ့ သစ်သားအရောင်၊ အချစ်လေး ၀တ်ထားတဲ့ အနီရောင်တီရှပ်၊ အားလုံးဟာ လိုက်ဖက်ညီလှပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အမောပြေစေတဲ့ အချစ်ဆုံးပေးတဲ့ လက်ဆောင်မွန်တစ်ခုပါပဲ။ လွမ်းတိုင်း ကြည့်မိလို့၊ သတိရတိုင်း ကြည့်မိလို့ ဓါတ်ပုံထဲက ကောင်မလေးတော့ ဘယ်လိုနေမလဲတော့ မသိဘူး။ သူ့ဘေးနားက ဘီလူးကြီးတောင် အကြည့်ခံရလွန်းလို့ ရှက်ပြီး ပြုံးတောင် ပြုံးလာသလိုပဲနော်။
အရူးပြော အရူးယုံဆိုတဲ့အတိုင်း ချင့်ယုံကြလော။ ပုထုဇနောဥမ္မာ့တကော...
Posted by JulyDream at 10:44 AM 43 comments:
ငါ အိမ်ရှင့် ကလေးတွေကို ကျောင်းသွားကြိုရအုံးမှာ..."
စကာင်္ပူမှာ အိမ်ဖော် အိမ်အကူဆိုတာ မိသားစုတွေကို ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက် ကူညီပေးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ အရေးပါတဲ့ နေရာမှာ ရှိနေတဲ့သူတွေပါ။ အိမ်မှုကိစ္စ သန့်ရှင်းရေး လုပ်တာက အစ... ကလေးတွေကို ပြုစု စောင့်ရှောက်တာ အဆုံး.. အိမ်ဖော်ဆိုတာကို စင်္ကာပူရဲ့ လူနေရပ်ကွက် အိမ်ရာတွေမှာ မြင်တွေ့နေကျ မြင်ကွင်းတစ်ခုအဖြစ် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး တွေ့မြင်ရမှာပါ။ အခုတော့ ဆန်းဆန်းပြားပြား ကိစ္စတွေ ရှိလာပါပြီ။ ဘူကစ်ဘတော့ (Bukit Batok) တ၀ိုက်က အိမ်ရာတိုက်ခန်းတွေမှာ အိမ်ဖော်တချို့ အိမ်အလုပ်တွေအပြင် အခြားအလုပ်တွေပါ အပိုဝင်ငွေရဖို့ လုပ်နေကြပါပြီ။
သူတို့တွေထဲက တစ်ယောက်။ အင်ဒိုနီးရှားလူမျိုး အိမ်ဖော်တစ်ဦး။ ရို့စ်လို့ပဲ ခေါ်ကြပါစို့။ အမည်ရင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာတွေ ဆန်းဆန်းပြားပြား လုပ်သလဲဆိုတော့ အိမ်ဖော်အလုပ်အပြင် အချိန်ပိုင်း လိင်ဖျော်ဖြေမှု လုပ်ငန်း ပြည်တန့်ဆာ အလုပ်ကို အပိုဝင်ငွေရတဲ့ လုပ်ငန်းအနေနဲ့ အိမ်အနားတ၀ိုက်က လူလတ်ပိုင်းတွေကို အဓိက ဦးတည်ပြီး လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ လူငယ်ပိုင်းတွေတောင် သူတို့ရဲ့ သွေးဆောင် ဖြားယောင်းမှု အောက်က လွတ်ထွက် မရုန်းနိုင်တာတွေ ရှိနေကြပါတယ်။
အသက် ၅၀ နှစ်အရွယ် စီးပွါးရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဂျေဟာ အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ သူ့သားကို ရို့စ်နဲ့အတူ အိပ်ရာပေါ်မှာ ချစ်ရည်လူးနေစဉ် လက်ပူးလက်ကြပ် ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်များလွန်းတဲ့ ဦးဂျေဟာ အိမ်ကို ညဉ့်နက်သန်းခေါင်မှ ပြန်ရောက်လေ့ရှိပေမယ့် တစ်ရက်မှာ ရို့စ်နဲ့ သူ့သားတို့ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲက ဇာတ်လမ်းကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တိုးမိခဲ့တာပါ။ စိတ်ဆိုးနေတဲ့ ဦးဂျေက ရို့စ်ရဲ့ အလုပ်ရှင်ကို တိုင်ပြောမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခဲ့ပမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ သူ မလုပ်ရက်ခဲ့ပါဘူး။ သူ ဒီလို လုပ်လိုက်ရင် ရို့စ်တစ်ယောက် လက်ရှိ အိမ်ဖော်အလုပ်ကနေ ပြုတ်သွားမှာပေါ့။ ရို့စ်ကလည်း အဲဒီလို မလုပ်ဖို့ ခခယယ တောင်းပန်ရှာခဲ့ပါတယ်။
ကော်ဖီဆိုင်တွေ၊ ကလေးကစားကွင်းတွေမှာ တချို့သော အိမ်ဖော်တွေဟာ ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စု ရှိနေတတ်ပြီး ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ယောကျာ်းတွေကို ညုတုတုတွေလုပ်ပြီး မြူဆွယ်ကြပါတယ်။ ရို့စ်နဲ့ သူ့အပေါင်းအဖော် အိမ်ဖော်အချို့ဟာ ၀န်ဆောင်ခအနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၄၀ ကနေ ဒေါ်လာ ၆၀ ကြား ယူလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်း ရပ်ကွက်ထဲက ယောကျာ်းသားတွေကို ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
သတင်းထောက်တစ်ဦးက ရို့စ်ဖုန်းနံပါတ်ကို ရပြီး အလုပ်ကိစ္စ ပြောဆိုညှိုနှိုင်းဖို့ ချိန်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရို့စ်က တွေ့ချင်ပေမယ့် ထောက်ခံ ပြောဆို ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ ကြားလူမရှိလို့ တွေ့ရမှာ တွန့်ဆုတ်နေပါသေးတယ်။ ရို့စ်က ပြောပါသေးတယ်။ သူ့ကို ဟိုတယ်တွေမှာ ချိန်းရင် မသွားနိုင်ပါဘူး။ တခြားအိမ်ကိစ္စတွေနဲ့ အမြဲတမ်း အလုပ်ရှုပ်နေတတ်လို့ပါ။ သူ့ကို တွေ့ချင်ရင် သူနေတဲ့နေရာ အနားတ၀ိုက်မှာ နေထိုင်နေတဲ့သူ ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒါမှ အဲဒီအိမ်မှာ အလုပ် လုပ်ဖြစ်တာပေါ့တဲ့။ ရို့စ်က ထပ်မေးပါသေးတယ်။ အချစ်လေးမှာ ကွန်ဒုံးရော ပါလာသလားတဲ့။ နှစ်ပါးသွားမယ့် ရက်ကတော့ ရို့စ်ရဲ့ လက်ရှိအိမ်ရှင် အလုပ် သွားတဲ့နေ့အပေါ် မူတည်ပါတယ်။
အရှေ့ဂျာဗားမှာ နေထိုင်တဲ့ ကလေး ၃ ယောက်အမေ ရို့စ်ဟာ ခင်မင်ဖွယ် ကောင်းသလို စကားပြောလည်း သွက်ပါတယ်။ လက်ရှိ အလုပ်ရှင်ရဲ့ ကလေးတွေကို နေ့လည်ပိုင်းမှာ ကျောင်းကြိုဖို့ရှိတာကြောင့် သူမရဲ့ နှစ်ပါးသွားအက ဧည့်ခံချိန်ဟာ တိုတောင်းနိုင်ပါတယ်။ ရို့စ်ဟာ ကျောင်းဖွင့်ရက်တိုင်း မနက် ၈ နာရီခွဲမှာ ကလေးတွေကို ကျောင်းသွားပို့ပါတယ်။ အဲဒီလို ကျောင်းပို့ပြီးရင် အလုပ်အားသွားပြီဖြစ်တဲ့ ရို့စ်ဟာ သူရဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ဖျော်ဖြေ ဧည်ခံဖို့ အချိန်ရပါတယ်။ ကလေးတွေ နေ့လည် ကျောင်းမဆင်းခင် အချိန်ထိပေါ့။
စကားတွေ ပြောရင်း ဈေးညှိလိုက်တော့ ဒေါ်လာ ၅၀ ပါတဲ့။ သတင်းထောက်က ဆက်မေးပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ပြည့်တန်ဆာ အလုပ်ကို လုပ်ကြတဲ့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် အိမ်ဖော်လေးတွေရော မရှိကြဘူးလားတဲ့။ ရို့စ်က ပြန်ဖြေပါတယ်။ ဒီအိမ်ရာစခန်းမှာနေတဲ့ သူ့အသိ အိမ်ဖော်အချို့လည်း အခုလို အလုပ်တွေကို လုပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆက်ပေးဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရင် ငါ့ဖောက်သည်တွေက ငါ့ဆီကို ပြန်မလာကြတော့ဘူး။ အဲဒီတော့ ငါ ပိုက်ဆံ ဘယ်ရတော့မလဲတဲ့။
စင်္ကာပူမှာ အိမ်ဖော်အဖြစ် အလုပ်လုပ်တာ ၅ နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရို့စ်ရဲ့ ဖောက်သည်တွေက အသက်ကြီးပိုင်း အမျိုးသားတွေ များပါတယ်။ ရို့စ်ရဲ့ ပုံမှန်ဖောက်သည်တစ်ဦးက ကြေးကြီးကြီး ဈေးကောင်းပေးသလို လက်ဆောင်တွေလည်း ပေးတတ်ပါတယ်။ အခုတော့ သူက ဝေးတမြေခြားကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သွားပါပြီ။ အကယ်လို့များ ရို့စ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို သဘောကျရင် အချိန်မရွေး ဖုန်းဆက်ခေါ်ပါ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာ ခေါ်တဲ့အခေါက်တိုင်း ပိုက်ဆံ ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ ပျော်ရွှင်မှုတွေပဲ ပေးချင်တာပါလို့ ရို့စ်က ဖြည့်စွက် ပြောပါသေးတယ်။
ဈေးစကားပြောပြီး တကယ်လုပ်ငန်းစဖို့ အိမ်ပေါ်တက်ကြရအောင် လုပ်တဲ့အချိန်မှာ သတင်းထောက်ဆီကို ကြိုတင် ဇာတ်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်း ဖုန်းခေါ်သံတစ်ခု ၀င်လာပါတယ်။ မိသားစုဝင် တစ်ယောက် အခုဒီအိမ်ကို လာနေတာဖြစ်လို့ နှစ်ပါးသွားဖို့အတွက် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာ ပြောပြပြီး နောက်တစ်နေ့ကို အစီအစဉ် ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ရို့စ်ကလည်း ရက်ရွှေ့ဆိုင်းပေးဖို့ သဘောတူပေးပါတယ်။ သူ့အလုပ်ကို သူယူထားတဲ့ ငွေကြေးနဲ့တန်အောင် ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း... ထွက်မပြေးပါဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်း... သေချာ မှာသွားခဲ့ပါသေးတယ်။
နောက်တစ်ရက်မှာ ရို့စ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး သူ ဘယ်သူဘယ်ဝှါ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဖွင့်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ ဘာကြောင့် အခုလို အလုပ်မျိုးကို လုပ်ရတာလည်း ဆိုတာကိုလည်း တခါတည်း မေးခဲ့ပါတယ်။ ပထမတော့ ရို့စ် မဖြေပါဘူး။ အချိန်အတော်ကြာလေး စွံ့အနေပါတယ်။ ခဏကြာတော့ ရို့စ်က ပြောပါတယ်။
"ငါ့ယောကျာ်းက ၂၀၀၀ ခုနှစ်က ဆုံးသွားပါပြီ။ ငါ့မိသားစုကို ထောက်ပံ့ဖို့ ငါတစ်ယောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ တစ်လကို အိမ်ဖော် လစာ ၃၅၀ ဒေါ်လာဆိုတာ ငါ့အိမ်အတွက် မလောက်ငှတဲ့ ၀င်ငွေတစ်ခုပါ...."
အဲဒီလို ပြောပြီး ရို့စ် ဖုန်းချသွားပါတယ်။
Ref: The news paper on Sunday
March 15, 2009 Page 2
Posted by JulyDream at 12:15 AM 27 comments:
Labels: Living in SG, Report
ရင်ပြင်တော်အပေါ်မှ မုဆိုးတောင်သို့ အဆင်းလမ်း
ဖက်လှဲတကင်း ကြိုဆိုတတ်တဲ့ ထမင်းဆိုင်တွေ
မမောနိုင် မပန်းနိုင် တရွေ့ရွေ့နဲ့ သွားကြသည်
အဓိဌာန်ပြုပြီး လှုပ်လို့ရတဲ့ ကျောက်ထပ်တရာ စေတီ
ကျောက်တုံးကြီး ပြိုလဲသွားရှာတာ ကြာလှပြီဖြစ်တဲ့ နဂါးဘုရား
ကြိုးဝိဇ္ဇာက ကြိမ်ကြိုးလျှောက်ပြီး ရွှေသင်္ကန်းကပ်ပေးတဲ့ ကျောက်ထပ်ကြီး
Posted by JulyDream at 8:45 AM 17 comments:
ကင်ပွန်းစခန်း ခြေလျှင်လမ်းနဲ့ ရသေ့တောင်ကားလမ်း ဆုံမှတ်
ရသေ့တောင် ကားလမ်းနဲ့ ရသေ့တောင် ခြေလျှင်လမ်းခွဲ အလှူခံစခန်း
Posted by JulyDream at 11:00 AM9comments:
ဘိုးပြန်တောင် အကျော် လမ်းပြေပြေလေး
တောကြောင် တောကြက် မြွေပါ
Posted by JulyDream at 11:11 AM 17 comments:
နတ်ကြီးသည် အလေးအပေါ့ မစွန့်ရ
Posted by JulyDream at 10:10 AM 12 comments:
Posted by JulyDream at 10:10 PM5comments:
Posted by JulyDream at 11:39 PM 16 comments:
Posted by JulyDream at 8:00 PM 26 comments:
ကျွန်တော်ရဲ့ ဆရာ ဗိသုကာဆရာရွှေ...
ဂျပန်မှာ ပညာတော်သင်ခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်က ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ဗိသုကာဌာနမှာ ကျောင်းဆရာလုပ်ရင်း လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့သူတစ်ဦးပေါ့။ ဘုဂလန့်ကျကျ နေတတ် ပြောတတ်လို့ တချို့တွေက ဆရာ့ကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ မတည့်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဆရာက လူမုန်းများသလို လူချစ်လူခင်လည်း အလွန်ပေါပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗိသုကာ တပည့်ဟောင်းတွေက သူ့ကို ချစ်ကြောက်ရိုသေပါတယ်။ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ဆရာ့ကို တပည့်တွေ ချစ်ကြတာ မဆန်းပါဘူး။
ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ကြို့ကုန်းကျောင်းကနေ အပြန်ခရီးတိုင်းမှာ ဆရာရဲ့အိမ်ရှိတဲ့ လှည်းတန်းဘူတာမှာ ဆင်းပြီး ညနေခင်းတွေကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ဆရာနဲ့ စကားပြောဆို ရယ်မောရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းပိတ်ရက် ညနေပိုင်းတွေမှာလည်း ဆရာရှိတဲ့ လှည်းတန်းဘူတာကို တကူးတက ရထားစီးပြီး မလာရရင် မနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ဆရာနဲ့အတူ ဗိသုကာ ကျောင်းသားတွေ၊ ကျောင်းသားဟောင်းတွေ အပြင် ပန်းချီဆရာတွေ၊ ဂျာနယ်အသိုင်းအ၀ိုင်းက တက်သစ်စ အယ်ဒီတာတွေပါ ၀ိုင်းထိုင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဆရာပြောပြတဲ့ သတင်းစကားတွေကို နားထောင်ချင်ကြတယ်။ ဆရာရဲ့ ရှုထောင့်တွေကို ပုံဖော်ချင်ကြတယ်။ ဆရာရဲ့ အယူအဆ အတွေးအမြင်ကို သိချင်ကြတယ်။
ဘ၀တကွေ့မှာ ဆရာနဲ့ ကျွန်တော် ခဏတာ ဆုံတွေ့ရပေမယ့် ဆရာဆီက အတွေးအမြင်တွေ ဗဟုသုတတွေ ခံယူချက်တွေ မျှဝေရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗိသုကာပညာနဲ့ ပါတ်သတ်တာရော၊ နိုင်ငံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စုံပလုံစိအောင် ဆရာက မျှဝေပါတယ်။ ကျောင်းမှာ သင်ပေးလို့မရတဲ့ ပညာတွေ ဆရာဆီက ရစေပါတယ်။ ဆရာရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပါးစပ်တွေကို ပွင့်ဟစေတဲ့အထိ အြံ့သစေ အံ့အားသင့်စေပါတယ်။ တချို့ဟာတွေက ဆရာပြောပြမှ သိခဲ့ရတာမျိုးတွေပါ။ ရှေ့မီနောက်မီ ဆရာဟာ ခေတ်လည်းမှီပါတယ်။ အင်တာနက်နဲ့ အီးမေးလ်တွေကို အဲဒီအချိန်ကတည်းက သုံးနေပါပြီ။ လူကြီးဆိုပေမယ့် ခေတ်နောက်ကျ ကျန်နေလေ့မရှိပဲ လူငယ်တွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်လောက်အောင် အသိအမြင် ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝလှပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် ကျွန်တော် ရန်ကုန်ပြန်ခဲ့တုန်းက ဆရာ လက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ သုဝဏ္ဏကို သွားခဲ့ပြီး ကျွန်းရွှေမြိုင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်ပြီး စကားတွေ ပြောခဲ့ကြပါသေးတယ်။ အခုချိန်ထိတော့ ဆရာက ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိလှပါတယ်။ သန်သန်မာမာပါပဲ။ ပေါက်တက်ကရ ဟာသတွေလည်း ရယ်ရယ်မောမော ပြောနေတုန်းပါပဲ။ အဲဒီလိုပဲ နိုင်ငံရေးတွေလည်း မပြောပဲ မနေပါဘူး။ နိုင်ငံတကာရေးရာ ကမ္ဘာ့ရေးရာတွေလည်း ပါတာပေါ့။ ကျွန်တော် ရန်ကုန်ကနေ ဒီကို ပြန်လာတော့ ဆရာက စာအုပ်နှစ်အုပ် လက်ဆောင် ပြန်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။
သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဗိသုကာ ဆရာရွှေအတွက် အမှတ်တရပါ။
Posted by JulyDream at 1:24 AM 22 comments:
ဟိုရှေးရှေးတုန်းကပေါ့။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာ ဆရာပေါက်စဖြစ်နေတဲ့ အသက် ၂၀ မပြည့်တပြည့် ကောင်လေးတစ်ယောက် ရှိခဲ့တယ်။ တစ်နေ့တော့ ကျောင်းမှာ အလုပ်နေရာတွေအတွက် အင်တာဗျူး လုပ်မယ်ဆိုတော့ အဲဒီမှာ ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ သူက အင်တာဗျူး အတွေ့အကြုံ ရအောင်ဆိုပြီး အပျော်သဘောမျိုး လက်တည့်စမ်း ဖြေလိုက်ပေမယ့် အလုပ်တစ်ခု ရလိုက်တယ်တဲ့ကွယ်။ အလုပ်ကတော့ ပထမနှစ် ကျောင်းသားတွေ ပရောဂျက်လုပ်တဲ့အခါမှာ ကြီးကြပ်ပေးရမယ့် စူပါဗိုက်ဆာ ဆိုတဲ့ ရာထူးပါပဲ။ ပရိုဂမ်မာဖြစ်ချင်နေတဲ့ သူ့အတွက်တော့ ဒီအလုပ်က ကွတ်တိပါပဲ။ ဒီပလိုမာ ပထမနှစ်ရဲ့ ပရောဂျက်တွေက ပရိုဂရမ်းမင်း ပရောဂျက်တွေပဲလေ။ အဲဒီတော့ ပုံစံမျိုးစုံကို တွေ့ထိရပြီပေါ့ဗျာ။
အဲဒီလိုနဲ့ တစ်ဖွဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ ကိုင်လာခဲ့တာ ၁၁ မီးငြိမ်းတဲ့ ဆရာကို ဖြစ်လို့။ တစ်ရက်မှာ စာသင်ခန်းတစ်ခုရဲ့ ရှေ့မှာ ဖိုင်တွဲလေးကို ရင်မှာဖိပြီး မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ နတ်သမီးလေးတစ်ပါးကို ရင်ခုန်ဖွယ် တွေ့ခဲ့လိုက်ရတယ်။ ဖြူဝင်းတဲ့ အသားအရည်နဲ့ သေးသွယ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှဟာ ပိုင်ဟွေ့ဒီဇိုင်းလို့ ခေါ်ကြတဲ့ ရှန်ဟိုင်းစတိုင် ၀တ်စုံလေးနဲ့ တွဲဘက်ထားတော့ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် ရိုးရိုးစင်းစင်းလေး လှနိုင်လွန်းတယ်လို့ သူ့စိတ်ထဲမှာ စွဲထင်နေခဲ့တာပေါ့။ သူ့အတွက် ရင်ခုန်ဖွယ် တိမ်းညွတ်စေတဲ့ နတ်သမီးလေးဟာ ရိုးရိုး ကွန်ပျူတာသင်တန်း ကျောင်းသူလား၊ ဒီပလိုမာသင်တန်းသူလား ဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်လည်း မသိခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ဒီပလိုမာ အတန်းတစ်ခုရဲ့ ပရောဂျက်တွေ ကိုင်ရမယ့် အလှည့်ကို ရောက်လာပြန်ပါပြီ။ ပရောဂျက် လုပ်မယ့်သူတွေကို စာသင်ခန်းတစ်ခုမှာ စုထားကြတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ စူပါဗိုက်ဆာတွေ အဖွဲ့တွေ ခွဲယူရမယ် ဆိုတော့ သူလည်း လိုက်လာရပြီပေါ့။ လူစုထားတဲ့ အခန်းထဲကို သူလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ နတ်သမီးလေးကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ခြေလှမ်းတွေကို ရပ်လိုက်ပြီး အခန်းထဲကို ချက်ချင်း မ၀င်သေးပဲ ပရောဂျက်အခန်းထဲက နောက်ကျမှ ထွက်လာတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အခြား စူပါဗိုက်ဆာ ၂ ယောက်ကို စောင့်နေလိုက်တယ်။ အဲဒီ ၂ ယောက် ရောက်လာတော့ တိုးတိုးလေး လှမ်းချိတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီ နတ်သမီးလေး အဖွဲ့ကို သူ ကိုင်မယ်ပေါ့။ ဟို ၂ ယောက်ကလည်း သဘောပေါက်တယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ကို သူတို့ တာဝန်မယူပဲ ရှောင်ပေးမယ်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ နတ်သမီးလေးရဲ့အဖွဲ့ကို သူ ကိုင်တွယ် ကြီးကြပ် စူပါဗိုက်စ် လုပ်ပါတော့တယ်။
မိုးဖွဲဖွဲလေးတွေ ရွာနေတဲ့ နေ့တစ်နေ့...ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းမကြီး အပေါ်မှာ ကျိုက်ထီးရိုးက ၀ယ်လာတဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေကို ပေးရင်း သူက နတ်သမီးလေးကို မိုးရေထဲမှာ ချစ်ခွင့်ပန်ခံတယ်။ လမ်းမထက်မှာ နှစ်ယောက်စလုံး မိုးတွေ စိုလို့ပေါ့။ နတ်သမီးလေးကတော့ အဖြေမပေးသေးပါဘူး။ ဆောင်းရောက်တဲ့အထိ စောင့်ပါအုံးတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့နှစ်ယောက် ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဘ၀ချိုချိုလေးမှာ မိုးရေစက်တွေနဲ့အတူ ပျော်နေခဲ့ကြတယ်။
အတန်းဆင်းတာ အချိန်စောပေမယ့် နတ်သမီးလေးက အိမ်မပြန်သေးပဲ ရုံးဆင်းချိန်ရောက်မှ သူနဲ့အတူတူ အိမ်ပြန်တယ်။ ညအမှောင်မှာ နတ်သမီးလေးရဲ့ လက်ကို ဆွဲပြီး အိမ်လိုက်ပို့ပေးရတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရင်ထဲမှာ ကုလားဘုရားပွဲ လှည့်နေသလိုပါပဲ။ နေ့လည်ပိုင်းတွေမှာ တခြားအတန်းဖော် သူငယ်ချင်းတွေ ရှိပေမယ့်လည်း သူနဲ့ပဲ ထမင်းစား ထွက်ကြတယ်။ သူ မအားသေးရင် အားတဲ့အချိန်ထိ စောင့်ပေးရှာတယ်။ နတ်သမီးလေး အတန်းမပြီးသေးရင် သူကလည်း တစ်ယောက်တည်း ထမင်းထွက်မစားပဲ အတန်းချိန်ပြီးတဲ့အထိ အခန်းဝမှာ ထိုင်စောင့်နေတတ်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အဲဒီသင်တန်းကျောင်းက ဆရာမအချို့ရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ဒီစုံတွဲလေး အတွဲညီလိုက်တာလို့ ပြောစမှတ် တွင်ခဲ့စေတယ်။
တစ်ရက် နေ့လည်ပိုင်း ထမင်းစား ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ နေ့လည်စာ ထမင်းစားရင် စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ အပေါ်ထပ် အဲယားကွန်းရှိတဲ့ အထူးခန်းမှာ စားကြလေ့ရှိတယ်။ တိတ်ဆိတ် အေးချမ်းပြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိတာကြောင့် သူတို့ အဲဒီနေရာကိုပဲ သေချာရွေးထားတာပါ။ ထမင်းစားပြီး ဆိုင်အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာတော့ ဇူလိုင်မိုးသည်းတွေ ထစ်ခြုန်းရွာနေတယ်။ တိမ်ညိုတွေ အလုအယက် ပြိုဆင်းနေတယ်။
အတန်းတက်စရာရှိတဲ့ နတ်သမီးလေးနဲ့ အလုပ်လုပ်စရာရှိတဲ့ သူ့အတွက် မိုးစဲနေကို စောင့်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သူ ယူလာတဲ့ ထီးလေးကို ဖွင့်ပြီး ထီးတစ်ချောင်းအောက် နှစ်ယောက်အတူတူ ဆောင်းပြီး ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ နတ်သမီးလေးကို ချစ်လွန်းတဲ့ သူက ထီးအောက်မှာ သိပ်မနေပဲ နတ်သမီးလေးဘက်ကိုပဲ ထီးမိုးပေးထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သည်းသည်းမဲမဲ ရွာသွန်းဖြိုးနေတဲ့ မိုးဒေ၀ါက သူတို့နှစ်ယောက်ကို ရွှဲရွှဲ စိုစေခဲ့တယ်။ ချမ်းချမ်း တုန်စေခဲ့တယ်။
မျက်မှန်ပေါ် လာတင်နေတဲ့ မိုးရေစက်တွေက သူရဲ့ မြင်ကွင်းတွေကိုေ၀၀ါးစေခဲ့တယ်။ မျက်စိမှုန်တဲ့ သူ့အဖို့ မျက်မှန်ချွတ်လိုက်ရင်လည်း မြင်ကွင်းတွေက မကြည်လင်ပြန်ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ မျက်မှန်ကို တကူးတက လက်မှာ မကိုင်ထားချင်တဲ့ သူက မျက်မှန်မချွတ်ပဲ ရှေ့ကို စွတ်တိုးနေခဲ့တယ်။ လက်တစ်ဘက်က ထီးကို မြဲမြဲကိုင်ရင်း နောက်လက်တစ်ဘက်က နတ်သမီးလေးရဲ့ လက်ကို ခိုင်ခိုင်တွဲထားလို့ပေါ့။ မိုးကလည်း သည်းတုန်းပါပဲ။
၀ုန်းကနဲ... ဆိုတဲ့ အသံလိုမျိုး သူ့နားထဲမှာ ကြားလိုက်ရတယ်။ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ထူပူရှိန်းတိန်းသွားတယ်။ ထီးကို လက်မှာ ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း သူ ဖင်ထိုင်လဲကျတော့မလို ယိုင်တိုင်တိုင် ဖြစ်သွားတယ်။ မျက်မှန်လည်း ကျွတ်ကျသွားလို့ မမြင်မစမ်းနဲ့ လိုက်ကောက်ရသေးတယ်။ ဘေးနားက နတ်သမီးလေးကတော့ တခစ်ခစ် ရယ်နေလိုက်တာများ မိုးသည်းထဲမှာတောင် အတိုင်းသား ကြားနေရတယ်။ ရုတ်တရက် သူ ဘာဖြစ်သွားမှန်း မသိရသေးတဲ့အတွက် မျက်မှန်ပေါ်က မိုးရေစက်တွေကို ပုဆိုးခါးပုံစနဲ့ အရင်ဦးဆုံး သုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကြည်လင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မျက်မှန်ကို တပ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါ မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက "အားလားလား..." ရှေ့တည့်တည့်မှာ ဓါတ်တိုင်ကြီးကို မြေကြီးနဲ့ ဆွဲတင်းပေးထားတဲ့ သံမဏိကြိုးလုံးကြီးပါလား။ မိုးရေထဲမှာ မမြင်မစမ်းနဲ့ ဓါတ်တိုင်ကို ဆွဲထားတဲ့ ကြိုးကို တည့်တည့်ကြီးကို ၀င်တိုးမိတာကို။
ကျောင်းပြန်ရောက်တော့ မှန်ထဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သူ့နဖူးကနေ နှာထိပ်အထိ အရှိုးရာကြီးက အပေါ်အောက် တန်းနေတာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လာတာလဲ ဆိုတာကို ပရောဂျက်အဖွဲ့တွေက ပြုံးဖြဲဖြဲနဲ့ မေးပေမယ့် သူ့မှာ ဖြေစရာ စကားလုံး ရှာမရခဲ့ဘူး။ တစ်ယောက်လာမေးတိုင်း တခစ်ခစ်နဲ့ ထိုင်ရယ်နေတာ သူ့ရဲ့ နတ်သမီးလေးပေါ့။ သူ့မှာတော့ ရှက်ရှက်နဲ့ မျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံး နီရဲတွတ်နေပြီ။ မျက်နှာတည်လွန်းတဲ့ သူ့ကို အခုလို ပုံစံမျိုးနဲ့ မြင်ရတော့ လူတွေက ပိုရယ်ချင်ကြတယ်။ ဟီးဟီးဟားဟားလည်း မရယ်ရဲကြတော့ ပါးစပ်လေးတွေ အုပ်ပြီး ကျိတ်ရယ်ကြတယ်။ အဲဒါတွေကို မြင်ရလေလေ သူမျက်နှာကြီးက ပိုပြီး နီလာလေလေပါပဲ။
တစ်ပတ်လောက်အထိ သူ့မျက်နှာမှာ အဲဒီအရှိုးရာကြီးက ဟန်ပါပါနဲ့ မင်းမူကြီးစိုးနေခဲ့ပါတယ်။ မျက်နှာအုပ်ပြီး နေလို့ရတဲ့ ဘ၀မျိုး မဟုတ်တော့ ဒီမျက်နှာကြီးနဲ့ ဒီလိုပဲ ရယ်သံတွေကြားမှာ ဒုက္ခခံခဲ့ရတာပေါ့ကွယ်။
ဟိုးတချိန်တုန်းက ဒုက္ခလှလှကြီးဟာ အခုချိန်မှာ ပြန်တွေးမိတော့လည်း ပြုံးချင်စရာ ဘ၀မှတ်တိုင် တစ်ခုအဖြစ် သူ့ဘ၀မှာ တည်ရှိနေခဲ့ပါပြီလေ။
ကျွန်တော့်ကို Tag ရေးပါဆိုတဲ့ ညီမငယ် ၀က်သိုး ခေါ် နှင်းပွင့်ဖြူလေးရေ... အခုပို့စ်ကို ကျေနပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကဲ... အစဉ်အလာရ လက်ဆင့်ကမ်းရမယ်ဆိုရင်တော့...
ပလာတာ မကြိုက်တဲ့ ရွှန်းတီ...
Posted by JulyDream at 11:23 PM 17 comments:
Labels: Life, Straw, Tag Game
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ညနေပိုင်း ၄ နာရီကျော်မှာ စင်္ကာပူရဲ့ အထင်ကရ အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ Merlion ရုပ်တုကြီး မိုးကြိုးပစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ မိုးကြိုးဒဏ်ကြောင့် ရုပ်တုကြီးရဲ့ ခေါင်းပေါ် လည်ဆံမွှေးတွေ နေရာမှာ အပေါက်ကြီး ၂ ပေါက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ မိုးကြိုးဒဏ်ကြောင့် Merlion ရုပ်တုကြီးရဲ့ အနားတ၀ိုက်မှာ လာရောက် လည်ပတ် ဓါတ်ပုံရိုက်နေတဲ့ ဧည့်သည်များ တစ်စုံတရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။
အပူပိုင်းမုတ်သုံဒေသမှာ တည်ရှိနေတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံအဖို့ အခုလို မိုးကြိုးပစ်ခံရခြင်းကို မကြာခဏ ခံရလေ့ရှိတဲ့ နိုင်ငံစာရင်းထဲမှာ ပါပါတယ်။ ၁၉၈၂ ကနေ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း ပျဉ်းမျှအားဖြင့် ၁ နှစ်မှာ ၁၈၆ ရက်လောက် မိုးကြိုးပစ်ခံရကြောင်း National Environment Agencyရဲ့ မိုးလေ၀သဌာနက ပြောကြားပါတယ်။
ဥပဒေအရ လူနေထိုင်တဲ့ အဆောက်အဦးတွေတိုင်းမှာ မိုးကြိုးလွဲတွေ တပ်ထားပေမယ့် အခုရုပ်တုကြီးမှာတော့ မိုးကြိုးလွဲ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အထပ်မြင့် မိုးမျှော် အဆောက်အဦးကြီးတွေ ၀န်းရံနေတဲ့ Merlion ရုပ်တုကြီးဟာ မိုးကြိုးဒဏ်ကို လုံလောက်စွာ အကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့် အနီးဆုံး အဆောက်အဦးဖြစ်တဲ့ One Fullerton building နဲ့ အကွာအဝေး အတော်ဝေးဝေးမှာ တည်ရှိနေခဲ့တာကလည်း အခုလို မိုးကြိုးပစ်ခြင်း ခံရတာပါလို့ NUSက ပါမောက္ခတစ်ဦးကလည်း ရှင်းပြပါသေးတယ်။
အခုတော့ ရုပ်တုကြီးကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံနေပါပြီ။ Merlion ရုပ်တုကြီး ခြင်ကိုက်ခံရပြီး သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်မှာ စိုးလို့ တာဝန်ရှိသူများက လောလောဆယ်မှာ ခြင်ထောင်ချပေးထားပါတယ် ခင်ဗျာ။
Photo Credit: www.asiaone.com
Posted by JulyDream at 10:20 PM 16 comments: